pịa, Odee na BikeHike
Banyere chepụtara: pịa
Mgbe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ asaa gachara, Christopher Paolini ga-ewepụta akwụkwọ nke ise ya n'usoro usoro ihe nketa nke aha ya bụ The fork, the Witch, and the Worm. The fantasy novel nke
Cycle 25 of America's Next Top Model bụ okirikiri na-abịanụ nke e chere na ọ ga-amalite na VH1 oge ụfọdụ na 2019. Dị ka nke 2020, ọnweghị ọkwa ọkwa gọọmentị emere. Ụlọ
Mmụba nke obi obi, ike muscular na ndidi mmega ahụ. Na mgbakwunye na njupụta ọkpụkpụ ka ukwuu, ịgba ọsọ dị ka mmega ahụ na-enye ọzụzụ ọzụzụ nwekwara ike inye ahụmịhe ikuku dị iche iche maka onye na-agba ígwè, na-eduga.
A na-ahụ Levonorgestrel n'ime ọgwụ mgbochi ịmụ nwa, mana atụmatụ B nwere oke dose nke nwere ike ịgbanwe ọkwa hormone nke anụ ahụ gị. Hormone ndị ọzọ nwere ike, n'aka nke ya, na-emetụta ahụ
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji gbakee site na okirikiri testosterone? Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ikom niile nwere mkpokọta testosterone na-alaghachi na nkịtị ọnwa atọ mgbe njedebe nke okirikiri, na
Ogologo oge ole ka okirikiri steroid nke mbụ gị kwesịrị ịdị? A, ndị ọrụ ga-ewere steroid maka izu isii ruo izu 16 n'otu oge, na-esote izu ole na ole nke ịṅụ obere doses.
Azịza dị mkpirikpi maka ma ịgba ígwè ma ọ bụ na ị gaghị eme ka ụkwụ gị buru ibu bụ - mba. N'ezie, ịgba ígwè na-eme ka uru ahụ dị n'ụkwụ gị dịkwuo mma, mana dịka mgbatị ahụ nke ikuku.
Ee, Fitbits nwere ike soro ịnya igwe kwụ otu ebe site na iji teknụzụ akpọrọ SmartTrack na ha na-enyere ndị na-agba ígwè aka n'ọtụtụ ụzọ. Otu akụkụ dị iche iche nke ọtụtụ ngwaahịa Fitbit,
1 2 ... 26,498 Osote